Faarax Cabdulqaadir oo iska sii wata shaqadii wasaaradda RW Cabdiweli ka qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faarax Cabdulqaadir oo iska sii wata shaqadii wasaaradda RW Cabdiweli ka qaaday
27th October 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wasiirka uu 25-kii bishaan October uu xilka ka qaaday R/wasaase Cabdi Weli Sheekh Axmed, loona dhiibay wasaaradda Xanaanada Xoolaha Faarax Sheekh C/qaadir ayaa iska wata shaqada wasaaradda Cadaaladda iyo arrimaha Federaalka oo laga ceyriyey.
Faarax Sheekh C/qaadir ayaa shaqada kusii wata go’aanka uu soo saaray saaxiibkiisa uu markii hore kursiga geeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo isla 25-kii bishaan waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadista lagu sameeyey Faarax Sheekh C/qaadir.
Faarax iyo xubnaha la midka ah ee ay saameysay isku shaandheynta R/wasaare Cabdi Weli ayaa waxaa ku jiha wareeray dadka Soomaaliyeed, iyadoo madaxweyne Xasan boosaskoodii hore la rabo, halka R/wasaare Cabdi Weli ka doonayo iney kuraasta cusub ku wareegaan.
Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa shalay soo xiray tababar 3 maalmood shaqaalo kamid ah wasaaradiisa lagu siinayay isla xarunta wasaaradaasi kaasoo lagu baranaayay Xirafadda Maaraynta xafiisyada.
Faarax oo xilkiisa shaki ka jiro ayaa yiri “Waxaan balan qaadayaa intii awoodayda iyo intii awooda wasaaradda ah in xooggeena la galiyo tayaynta shaqaalaha. Taa waxaan doonaynaa inay ka muuqato shaqadeena, dhaqankeena, muuqaalka qofka shaqaynaayo, goobta lagu shaqaynaayo iyo inaan ka gudubno maxaa iga galay dawlad baa iska leh. Dhaqanakaas inuu dhamaado ayaan rajaynayaa. Qarankan idinka ayuu idiin baahanyahay”.
Is faham-waaga u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo R/wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ka dhigaya shaqada dowladda mid cakiran, maadaama wasiirada ku fekerka ah madaxweynaha ay qabanayaan waxa uu rabo, halka kuwa fekerika ah R/wasaaraha aya qabanayaan wax uu rabo.
Jawaari: Khilaafka madaxweynaha & R/wasaaraha saameyn kuma yeelan doono Higsiga 2016
Puntlnad: Khilaafka madaxda dowladda halagu xaliyo dastuurka dalka